UltraSMSScript: Tenga Yakazara SMS, MMS, uye Voice Kushambadzira Platform Ine API | Martech Zone
China, June 2, 2022 China, June 2, 2022 Douglas Karr
Kutanga meseji meseji zano inogona kuve inonetsa kuita maitiro. Zvitende kana usazvitenda, vatakuri vanonyanya kunyorerwa kunyangwe nhasi… tumira mapepa, ita kuti data rako rekuchengetedza uye zvakavanzika zviongororwe, uye kusaina pamvumo yeSMS. Ini handisi kuyedza kurevesa kukosha kwekuteera neiyi svikiro, asi kushushikana kwekutama kana kubatanidza mhinduro yeSMS kunogona kushungurudza kune mvumo-yakavakirwa, mushambadzi ari pamutemo.
Maitiro eSMS Kushambadzira akaomarara akajairika. Mapuratifomu mazhinji eSMS, semuenzaniso, ita kwete kutaurirana nekubatanidza zvakananga nevatakuri veSMS. Iko kune kazhinji kushambadzira kweSMS kana chikuva chekutaurirana icho chinotaurirana nebasa rinozobatana kune meseji gedhi iro rinotumira meseji kuburikidza kune anotakura.
Nepo chikuva cheSMS chingave chinoshamisa, ivo vanovimba neSMS meseji gedhi kuti system yayo ishande. Kubva pamaonero emitengo, zvinoreva kuti unobhadharira software yako, unobhadhara mari yekutumira mameseji kupuratifomu yako, unogona kubhadhara kuti uwane mamwe mazwi akakosha, vobva vabhadhara mari yekutumira mameseji kugedhi remeseji. Mutengo weSMS unogona kukurumidza kuputika… kunyanya sezvo vatengi vari kutora SMS kakawanda kuti vataurirane nemabhizinesi.
Pakupera kwegore rapfuura, vatengi vanosvika mamirioni makumi manomwe neshanu vachange vasarudza-kupinda kuti vagamuchire mameseji eSMS kubva kumhando dzavanofarira. 48.7% yevatengi vanofunga kushambadzira kweSMS inzira huru yemabhizinesi ekuti vatarise. 70% yevanhu vanoti vanovhura meseji yega yega yavanogashira.
Lauren Pope, 45 SMS Kushambadzira Statistics Vatengi Vako Vanoshuvira Iwe Kuziva
Kune mamwe anoshamisa akasimba uye anodhura magedhi eSMS kunze uko iwe aunogona kunyoresa nekushandisa zvakananga kuburikidza neAPA akasimba, kusanganisira Twilio, Plivo, Telnyx, SignalWire, Nexmo, Ytel, uye Bandwidth. Aya mapuratifomu ane software yekuvandudza kits iyo inosangana neiyo robust APIs kuti ikubatsire iwe kukudziridza yako yeSplatform chikuva kana kubatanidzwa zvisinei iwe zvaungade. Nehurombo, zvakadaro, izvo zvinoda hunyanzvi hwekuvandudza, zvivakwa, uye kuenderera kwekugadzirisa.
UltraSMSScript: Tenga uye Gadzirisa Yako Yako SMS Kutumira Meseji Platform
Imwe nzira isingadhure yekugadzira yako yeSMS meseji chikuva kana kubhadhara pamwedzi muripo werezenisi kupuratifomu yepamhepo kutenga iyo kodhi uye kuimhanyisa pane yako wega. Izvi zvinogona kukubatsira kusimuka uye kumhanya nekukurumidza pamwe nekuona kuti chikuva chako chinoenderana, chakachengeteka, uye chakagadzikana. UltraSMSScript ichena-label software ine API yaunogona kutenga nekumisikidza iwe wobva washandisa chero yeSMS gedhi. Iko hakuna mari inoenderera uye iwe unobhadhara inodhura mari yekutumira meseji yeSMS sezvo uri kushanda zvakananga negedhi.
UltraSMSScript Zvimiro Sanganisira
Vadivelu Comedy Mobile Coupons - Gadzira akanaka Maponi Coupons kutumira kune ako vatengi. Idzi inzira huru yekuvaka yakavimbika vatengi base nekupa mubayiro vatengi vako varipo. Coupon yega yega inogadziriswa zvachose uye inosanganisira akawanda marongero uye maficha anokutendera kuti uchinjike nemabatiro aunoda kuzviisa.
Q&A SMS Bhutsu - Gadzira otomatiki maSMS mibvunzo uye mhinduro dzakasarudzwa nekutumira mameseji muzwi rakakosha. Unogona kugadzira mibvunzo yakawanda zvakateedzana sezvaunoda. Yakakura kune rutsigiro rwevatengi, mibvunzo, kuunganidza yakakosha mhinduro, uye kukura runyorwa rwako.
Tumira Bulk SMS - Pamwoyo weSMS yekushambadzira mushandirapamwe kugona kutumira mameseji eSMS mune akawanda kune vako vanyori. Tumira kune 1 boka kana akawanda mapoka kamwechete! Tumira mameseji kune vatengi vako kuti vazivise madhiri kana zvikwereti zvaunoda kusimudzira izvo zvinogona kuunza rakakura bhizinesi.
Isingagumi Nharembozha Mazwi -Kugona kwevashandisi kuita mukushambadzira kwemazwi. Mazwi enharembozha chinhu chekushambadzira nharembozha kukwezva kune imwe musika unotangwa. Iwe unowana mukana kune unlimited keywords! Vanhu vanogona kusaina kushambadzira kwako kwemavara nekutumira mameseji akakosha.
Bulk SMS Kuronga - Kuronga kutumira mameseji muzvikamu inzira huru yekuita kuti vatengi vako vasazokanganwa nezvako. Yedu script inokutendera iwe kuti uve izere kutonga kwekuti kana mameseji eSMS anotumirwa kunze kuti ugone kuronga kunze mameseji mwedzi pamberi.
Autoresponders - Mushure mekunge munhu ajoina yako yekunyoresa runyorwa, otomatiki vatumire yavo yakasarudzika meseji kumashure. Iwe unogona zvakare kumisikidza ivo autoresponders kuti vangotumira SMS voga kune vanyoreri mushure mekunge vanyorera pane yakatarwa purogiramu senge email email vanopindura vanoshanda.
Tumira MMS / Meseji Yemifananidzo - MMS inounza yakanakisa yeemail uye kukurumidza kweSMS kune ako vatengi kutaurirana. Penda mufananidzo wese nevapfumi vezvenhau pane yega nhare mbozha, iine padyo-100% yakavhurika mitengo uye nekukurumidza kupindura nguva.
2-Nzira SMS Chat - 2-nzira SMS chat inobatanidza iwe kana yako dhipatimendi rebasa revatengi kune ako mbozha vatengi, kuburikidza neSMS. Unganidza mhinduro yakakosha uye ita kutaurirana nevatengi vako nzira mbiri-nzira, zvese kuburikidza neSMS ine pakarepo mutumwa interface!
Sub-Maakaundi - Iva nenhengo dzechikwata dzaunoda kuendesa basa pane akasiyana ma module mukati mepuratifomu uye unongovapa mukana kune mamwe maficha? Iwe unogona kuzviita needu madiki-maakaundi!
Dzokororo Meseji - Unoda kuronga nhevedzano yemeseji nguva zhinji? Unogona kudzokorora zviitiko zuva nezuva, vhiki nevhiki, pamwedzi, uye pagore, uye kuwanda kwezviitiko zvakarongwa (zuva rega rega, zuva rechipiri rega, zuva rechishanu rega rega, kamwe pasvondo, mavhiki maviri ega ega, nezvimwewo…)
SMS Makwikwi -Gadzira makwikwi eSMS senzira yekubatana uye kupa mubairo vatengi vako varipo uchivashandisa sechishandiso chikuru kukura rondedzero yako. Hapana chinhu chakakosha kupfuura kuchengeta vatengi vako vachifara uye kukura runyorwa rwako panguva imwe chete!
Zuva rekuzvarwa SMS Anoshuva - Nyore unganidza ako ehama 'mazuva ekuberekwa kana ivo vanyorera kune ako runyorwa. Zvino, pazuva ravo rekuzvarwa kana kunyangwe imwe nguva yemazuva zvisati zvaitika, system yedu inozongovatumira rako rekuzvarwa meseji.
Kubatanidzwa kweFacebook - Mano ekugovana yako meseji kune yako Facebook peji! Paradzira izwi uye wedzera kutora chikamu pakati pevateveri vako vachikupa kugona kukura vako vanonyorera nekugovana mameseji ako pane yako Facebook account.
Bulk SMS Dhirivhari Stats - Wona akadzama manhamba senge # eakabudirira mameseji, # eakakundikana mameseji, uye chikonzero nei meseji yakundikana, uye bvumidza mushandisi kudzima chero vanyoreri kubva pane iyo rondedzero yatadza kugamuchira mameseji.
Yakadzama Campaign Analytics - Teedzera mishandirapamwe yako kuti utarise zvakadzama kuti ndeapi mazwi akakosha ari kuita akanakisa, akasarudzika matanda eSMS, uye vatsva nyowani uye vasina kuzvinyoresa pane imwe nguva yenguva.
Webhusaiti Signup Widgets - Bvumira vangangoita vatengi kujoina chinyorwa cheSMS chekushambadzira kuburikidza newebhu-yakavakirwa fomu inoiswa pawebhusaiti. Izvi zvinopa imwezve nzira-inodhura nzira yekusvika uye kukwezva vatengi vatsva.
SMS Polls - Gadzira mameseji-kuvhota kuti vachengeti vako vabatikane uye vafarire izvo zvaunofanira kupa pamwe nekuunganidza ruzivo rwakakosha uye uwane nzwisiso yezvavanoda uye zvavanoda kubva kwauri.
Nhare mbozha Splash Peji Inovaka - Yakakwana kune vashandisi vanoda kugadzira avo mapeji ane vhidhiyo, mifananidzo, kana chero HTML vobva vatumira iwo iwo ma URL URL kune avo vanonyoreswa runyorwa kuti vaone. Yakagadzirirwa izere-inoratidzira yakazara HTML edhita.
Zviyeuchidzo zvekugadzwa - Ronga uye tumira zviyeuchidzo zvekugadzwa kune ako vatengi kuona kuti havazokanganwe nezve musangano wavakaita. Tsvaga wekubata kwako uye nyore nyore kuronga SMS kuti ubude kwavari.
Yakavakwa-Mukana Kufupisa & Kutevera - Iwe une sarudzo yekupfupisa mahukama ako kuti asatore mavara mazhinji mumeseji yako mameseji uyezve nekutarisa kuti mangani mabhatani akagadzirwa kune chakapihwa chinongedzo kuti uone kuti meseji yako yaishanda sei. Chishandiso chidiki chinobatsira!
Nhamba dzeMunharaunda - Unganidza mhinduro yakakosha uye ita kutaurirana nzira-mbiri nzira dzese kubva munharaunda dzinozivikanwa nhamba dzenhare! Wedzera nhamba dzenzvimbo dzakawanda kuaccount yemushandisi. Tumira mameseji kubva padziva renhamba dzenhare kuti akurumidze kuendesa kana kunonoka.
Email Alerts - Tora matsva ekunyora emaemail sezvaari kuitika kana muchidimbu chezuva nezuva. Zvakare, tora yakaderera chikwereti chiyero email machenjedzo kuti iwe ugare uchigara uchiziva nguva yekuzadza yako macredit
Mameseji Matemplate - Sevha zvakajairika kana zvinowanzo shandiswa mameseji eSMS kuitira kuti usazombodzokorore meseji imwechete kakawanda. Ingosarudza iyo template yaunoshandisa uye iite kuti izadze iwo meseji iwe.
Nhepfenyuro Kubva Kunhare - Mukumhanya? Hapana dambudziko zvachose! Iwe unenge uine kugona kupururudza ako mameseji eSMS ekushambadzira neakareruka mameseji! Hapana chikonzero chekupinda muaccount yako kugadzirisa izvi maitiro.
QR Makodhi - Gadzira makodhi eQR senzira yekuvhara yako yekushambadzira isingabvumirwe kune yepamhepo nhare. Yedu software inouya yakashongedzerwa newanyorera uye webhu peji rewebhu QR kodhi.
Chikamu Vako Vaunofambidzana - Neboka redu rekuparadzanisa basa, unogona nyore kugadzira mapoka mukati meako zvinyorwa zvinyorwa zvinyorwa. Izvi zvinoronga vako vanofambidzana mumapoka uye zvinokutendera iwe kuti urambe wakarongeka vese vako vanonyoresa uye nekwavari kubva!
Nhepfenyuro Yezwi - Nhepfenyuro meseji yezwi kune vako vaunotaura! Chero mhando meseji uye iyo system inoshandura iwo mavara kuita izwi, kana kurodha yako wega meseji kuburikidza neMP3 faira. Imwe nzira huru yekutaurirana uye chengetedza vaunosangana navo vabatanidzwe muzvipiriso zvako.
Isa Zvinyorwa Zvako Zvekunyorera - Iva nesarudzo ye-in-SMS kubva kune imwe nzvimbo yaunoda kutamira pamusoro? Kunze kwekunge iwe uine yakajeka yakanyorwa mvumo kubva kune vako vanyori kuti ivo vakabvuma kugamuchira mameseji kubva kwauri, iwe unogona zvakare kurodha rako runyorwa futi. Takaita maitiro iwayo nyore nyore!
Voicemail / Kufona Kutumira - Voicemail uye kufona yekuendesa mberi kugona. Iva nesarudzo yekuti mafoni ako aende akananga kuvoicemail, kwaunogona kuti uvateerere mukati mepaneruji, kana kuti nhare dzako dziendeswe kunhamba chero yaunoda!
SMS kuemail / Email kuneSMS - Tora zviziviso zveemail kana mumwe munhu atumira chimwe chinhu kunhamba yako yepamhepo (SMS kune Email). Iwe unogona ipapo kupindura zvakananga kune iyo email kubva kune yako email mutengi, iyo sisitimu inotora iyo email, uye wovatumira mameseji (Email to SMS). Chishandiso chikuru uye chinobatsira kwazvo!
Zita uye Email Capture -Iva nesarudzo yekuunganidza zita uye email yemunyoreri mutsva achijoinha yako yekusarudza-in runyorwa! Unganidza mazita kuti ugadzirise mameseji ako eSMS uye maemail kana iwe uchida kusimudzira kwavari neemail yako yekushambadzira mishandirapamwe.
Bata manejimendi - Yakapusa kwazvo kushandisa manejimendi manejimendi sisitimu iyo ine yako yekuonana / vanyori Tsvaga uye gadzirisa vese vanonyorera pano.
SMS Punch Kadhi Kuvimbika Mibairo - Kanganwa izvo zvechinyakare uye zvinowanzoiswa zvisirizvo mapepa mapepa echikanda. Govera SMS "punch kadhi" kuvimbika mibairo kune vatengi vako uye kuvaka kuvimbika kune chako chiratidzo kuchengetedza vatengi vachifara uye vachidzoka.
Kiosk Builder - Dhijitari kuvimbika kiosk chishandiso chekupinza icho chinokutendera iwe kuti ugadzire nyore kushandisa kiosk kuratidza. Inopa vatengi vako vepa-saiti mushandisi-inoshamwaridza kuratidza - ichivarega vajoine kirabhu yefoni, tarisa kuchirongwa chekuvimbika, uye tarisa mamiriro avo azvino.
API - Tsvaga zvinonyanya kukosha zveiyo UltraSMSScript chikuva kuburikidza neAPI. Kubatanidza iyo UltraSMSScript API mune yako application kunogonesa iwe kuti uwedzere mashandiro epuratifomu muako wega app!
Email Kubatanidzwa -Kana email kubatwa kwakavhurwa, otomatiki wedzera maemail kune ako aunofarira email masevhisi senge Mailchimp, aWeber, GetResponse, ActiveCampaign, kana sendinblue! Zvese zvakabatwa seamlessly behind the scenes.
Fax yepaIndaneti -Tumira uye ugamuchire mafekisi pakati peUltraSMSScript nemuchina wefax! Tamisa bhuku remanyorero, mashandiro ekunze efax uye woshandura magwaro efax kuita ruzivo rwesoftware uku uchipa mabhizinesi kuchinjika nekubva kune yekare legacy hardware.
Kaviri Sarudza-mukati - Inesarudzo mbiri-yekukwanisa kugona kana ikashandurwa, vanhu vanowana imwe meseji vachivabvunza kuti vapindure na "Y" kuti vatsigire kunyorera kwavo. Kaviri kusarudza-mukati hakumanikidzi, zvisinei, zvinokurudzirwa zvakanyanya mune mamwe mamiriro ezvinhu zvichienderana nezviri mukati memashoko auchange uchitumira.
Yeiyo encoded vhezheni yeiyo PHP script, iwe uchagamuchira iyo yese sosi kodhi kuti ikubvumidze iwe kuti uchinje iyo yekumberi-kumagumo dhizaini zvinhu kana iwe uchida kuipa iyo chero chitarisiko uye unzwe iwe chaunoda. Nekudaro, mazhinji emafaira ekumashure-ekupedzisira anozonyorerwa. UltraSMSScript tizvishandise icube kukodhi uye rezinesi mafaera. Mazhinji makambani anotambira anotova neioncube loader yakaiswa uye inogoneswa sezvo ioncube iri indasitiri standard yekuchengetedza mafaira akaomarara. Yeiyo Chikamu 4 & ULTRA mapakeji echinyorwa, iwe unogashira zana% rekodhi kodhi uye, chokwadika, iwe unosaina chibvumirano chisiri-chekudzorera icho chinoti iwe hauzotengesezve iro chairo script.
Tenga UltraSMSScript Izvozvi!
Tags: AWeberyakawanda smskufonera kutumiraemail kune smsGetResponsekubatanidza kupfupisanhamba sms dzemunomailchimpMmsonline faxPHP chinyorwaQR MakodhiSendinBluesms analyticssms autorespondersms botsms chatsms vanobatikasms makuponisms keywordssms kiosksms kuvimbika chirongwasms sarudzosms chidimbusms kuemailsms widgetkutepfenyura nezwikushambadzira kwenzwiizwi kushambadzira chikuvavoicemail
Email Marketing Metrics: 12 Key Performance Zviratidzo Iwe Unofanirwa Kuve Kuongorora